Ingxelo Yobumfihlo: UMartin Vrijland
Eli nxiwa lelona (njengazo zonke kummandla EU) unyanzelwe ukuba angenise ingxelo yeemfihlo esekelwe phezu komthetho omtsha AVG leyo uqalisa ukusebenza ngomhla ngoMeyi 25 2018.
1. Iinkcukacha zoqhagamshelwano Stichting Martin Vrijland
Isiseko sinokuqhagamshelana ngefom yoqhagamshelwano kule ndawo.
Inombolo yeCandelo loRhwebi: 60411996
Ukusungulwa: iSt. Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2. Idatha yakho iqokelelwa yilo ndawo ngeenjongo ezininzi:
ukubhalisa kule website
ukubeka impendulo yakho
ukukwazi ukuthumela i-imeyile kwidilesi yakho ye-imeyile
ukuba ilungu elihlawulwe ngendlela yoxhasi
ukukwazi ukunqanda ukufikelela kwamanqaku athile
ukubhalisa ngokufumana isaziso esicacileyo ngokubonakala kwinqaku elitsha kule ndawo nge-imeyile
ukubhalisa ukufumana i-newsletter yeveki kunye / okanye ezinye iposi
ukunika uluvo lwakho kwimbono / poll
iinani zokulandelela kwiinombolo zabavakalisi kunye nokushaya
ukudibanisa neefowuni zeendaba zoluntu ezenza ukwabelana ngento elula
ukukwazi ukubona ukuba usebenzisa i-adblocker
3. Amaqela aya kukwazi ukufumana idatha eyimfihlo yokucwangcisa:
Idata yakho iya kuqala igcinwe kwi-server yangasese yeMartin Vrijland Foundation.
Ukongezelela, idatha yakho idluliselwe kubanikezeli be-plug-in yangaphandle-nxaxheba abasebenzisa idatha yakho yokucwangcisa idatha, njengoko kuchazwe phantsi kwe-2. Oku kukuxhalabisa ngeefayile ezilandelayo kwaye ngoko ke iinkampani ezakhe ezi zixhobo:
AdBlocker Yazisa Lite themeisle.com
IziPhuculo eziPhambili UThomas Maier
Ifom yoqhagamshelwano 7 Takayuki Miyoshi
Izithuba ze-imeyili kubhalisele Gopi Ramasamy
I-polldaddy Iipolisi kunye nokulinganisa nge-Automattic, Inc.
Umyili weProfayili Cozmoslabs
I-Google Adsense yiGoogel Adsense
Nciphisa iPro Content Content Nciphisa iqela leQela lokuQinisekisa
I-Counter Counter UPrisna
Imfazwe yeNtlalo - Pro nge Iimfazwe zeMfazwe
YOP Poll Pro usrownprogrammer
4. Ixesha apho idatha yakho igcinwa kuyo:
Idata yakho iya kugcinwa kunye / okanye isetyenziswe ngexesha lokubhalisa kule sayithi. Kufuneka uzibhalile kwaye uhambise isicelo sokususa idatha yakho. Idatha yakho yeendaba kunye ne / okanye ukufumana izilungiso ezichanekileyo malunga namaphepha alandelwa ngokutsha ziya kugcinwa nje kuphela xa ubhalisile ngokwakho. Kuzo zonke iimeko, kufuneka uphumelele ngokukhawuleza kuzo zonke iinkonzo kule ndawo.
5. Amalungelo malunga nedatha yakho:
Unelungelo lokubukela, ukulungisa okanye ukususa idatha. Unelungelo lokuchasa ukusetyenziswa kweenkcukacha zakho. Kufuneka wenze oku ngaphambili. Ukuba ufuna ukwenza oku emva koko, unokwenza ngoku kubhalwa ngeposi erejistini malunga nedilesi yeposi ye siseko saseMartin Vrijland, njengoko kuchaziwe kwiCandelo lezoRhwebo. Nangona kunjalo, ukuba kubonakala ukuba kunenjongo esemthethweni ukuqokelela idatha yakho, isiseko sinelungelo lokuqhubeka nokusebenzisa nokugcina le nkcukacha. Ayikho yonke inkcaso yenkcazo enikeziwe.
6. Iimpendulo kumanqaku:
Zonke izimvo zakho ezithunyelwe nguwe ngokupheleleyo kwi-akhawunti yakho. Oko kuthetha ukuba kuzo zonke iziganeko unesibophelelo kulokho ubhalayo; nangona ezi mpendulo zivunywe kuqala ngokumodareyitha ngumlawuli wesayithi ukufakwa phantsi kwinqaku.
7. Ilungelo lokudlulisa idatha yakho:
UMartin Vrijland Foundation unelungelo lokutshintshela idatha yakho kumalungu esithathu ekusebenziseni ukucwangciswa kwedatha ukuba oku kuhambelana neenkonzo ezinikwe kule ndawo. Oku kungenjalo, umzekelo, ngokuphunyezwa kwiplagi-kwesoftware eyenza ukuhlalutya ezithile kwiimanani, kodwa oku kungasebenza nakwiinkonzo zokuncedisa iimeyile njengeposi okanye iinguqulelo malunga namaphepha atshalwa ngokutsha. Oku kungasetyenziswa ekuthutheleleni kwelinye iseva okanye umniki-nkonzo, umzekelo.
8. Unelungelo lokurhoxisa idatha yakho:
I-website ye-martinvrijland.nl inikeza inketho ekhethiweyo ye-1 ongayibonisa ukuba ufuna ukuba idatha yakho ayisayi kusetyenziswa. Oku kunelungelo lokurhoxiswa. Ungasebenzisa ilungelo lakho lokurhoxiswa ngokuthumela isicelo esisayinwe ngokubhaliweyo ngekhophi yekhadi le-ID evumelekileyo okanye ipasipoti kunye neskrini-skrini yekheli lakho le-IP. Oku bubungqina bokuba ungumntu obangalayo. Oku kunokwenziwa ngokubhekiselele kwidilesi yeposi ye siseko saseMartin Vrijland, njengoko kuchazwe kwiCandelo lezoRhwebo. Nangona kunjalo, ukuba kubonakala ukuba kunenjongo esemthethweni ukuqokelela idatha yakho, isiseko sinelungelo lokuqhubeka nokusebenzisa nokugcina le nkcukacha. Ayikho yonke inkcaso yenkcazo enikeziwe. Amaxwebhu akho athunyelweyo aya kutshatyalaliswa emva kokuqinisekisa.
9. Igunya lolwazi lomntu:
Unelungelo lokufaka isikhalazo malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho negunya lomntu. Eli lungelo elisemthethweni. Ngoko ukuba unesikhalazo malunga nendlela le webhsayithi ejongene ngayo nedatha yakho, unokwenza ingxelo ngokusemthethweni kwigunya lomntu.
10. Ukurhoxiswa kwedatha:
Ukuba awunqweneli ukubonelela ngolwazi lwakho okanye ukuba unqwenela ukurhoxisa, awukwazi ukusebenzisa iinkonzo ezinikezelwe kule ndawo. Umlawuli unelungelo lokuthintela idilesi yakho ye-IP ukutyelela eli siza.
11. Ukufikelela okuthe ngqo:
Xa kuhlawulwa ubulungu ukuba ufake ngokohlobo yokunikela fixed ngenyanga nganye, okanye nge yebanki phindo, reperterende PayPal okanye ukudluliselwa qho ngetyala, sebenzisa ulwazi lwakho ukufumanisa ukuba uyakwazi ukufikelela iimveliso ezithile kuhlawulwa ukufikelela ngokupheleleyo. Konke oku kulawulwa ngapha ye plagi nokuhambisa, njengoko kuchaziwe phantsi ingongoma 3, kunye Thintela Pro Content. Ulwazi lwakho yoko alusetyenziselwa kuqaphela ukuba ngaba okanye ukufikelela amanqaku eziqondakalayo kuphela ngamalungu.
12. Inkcazo ilungu:
Inkcazo ilungu nawuphi na umntu othe wangena intlawulo ophinda indlela yokunikela Foundation Martin Vrijland ixesha article okanye elingenammiselo apho eendaba zemali nokuba kanti nokuba ngu esi sixhobo u tyikitye. Ukuba uyilungu, kufuneka ukwazi ukufumana idatha yakho phantsi esi sixhobo. Unokulungisa okanye ukukhansela isikhungo sakho malunga nobulungu bakho apho. Ubulungu bakho buhlala bubonakala njengomnikelo kuMartin Vrijland isiseko.
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.474.779